Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Star eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Umlindi Omncane". I-Hector Bellerin Childhood Story yethu kanye ne-Biography Fact ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokuba udumo, ubuhlobo bomndeni, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angaziwa nge-OFF-Pitch.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe okusheshayo kodwa abambalwa babheka i-Biography ka-Hector Bellerin enomdla kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UHéctor Bellerín Moruno wazalwa ngosuku lwe-19th ka-Mashi 1995 eBarcelona, ​​eSpain. Uyi-Pisces eqinisekisiwe ngokuzalwa. U-Hector wazalelwa uMnu noMnuz Maty Moruno bobabili, abaseSpain kanye nesakhamuzi saseCatalonia.
U-Héctor waqala izinsuku zakhe zokudlala ibhola ngaphakathi kwe-Barcelona Youth System kusukela esemncane kwe-6. Wasebenzisa iminyaka eyi-8 efunda ifilosofi yaseBrazil yezemidlalo ekubunjweni okungenakuphikiswa kwamaphiko.
Ngesikhathi eseyingane, uHéctor wabonisa ukuhamba kwakhe kombani kanye nesitayela sokuhlasela ngesikhathi sakhe eBarcelona. Ngezikhathi ezimbalwa, wavotelwa 'Indoda yomqhudelwano' ku-tournaments. Ukuthandwa kwakhe kwavela ku-2008 Umqeqeshi we-Canillas emhlabeni wonke eMadrid lapho enikezwa khona indoda yomklomelo womncintiswano owawunikezwa nguZinedine Zidane.
Wonke umlingani we-FC Barcelona wathanda i-Bellerín. Bathole injabulo lapho bembuka esebenzisa ijubane lakhe ngokuthatha abaphikisi abaphikisayo futhi asheshe asheshe aye endaweni evikelekile. Injabulo yabo yabanjwe umuntu oyedwa, u-Arsene Wenger.
Just like Cesc Fabregas, UBerneene Wenger waya eNorth London, eneminyaka engu-12 ubudala. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Kuqala. Thola iNews24 kumakhalekhukhwini wakho Kuqala. Thola iNews24 kumakhalekhukhwini wakho U-Hector Bellerin uphumelele Uke waba nobuhlobo besikhathi eside nomfanekiso omuhle we-Shree Patel.
Hector no Shree Patel
Ubuhle obumnyama buhlala eLondon futhi buzimpande zaseNdiya. Ufanise ukuthanda kukaCalvin Klein nomkhiqizo wezemidlalo u-Ellesse futhi unabalandeli abangaphezu kuka-20k ku-akhawunti yakhe ye-Instagram okuthiwa 'iamshree'.
UShree nguye kuphela owasiza uHector ukulwa nesizungu lapho efika eLondon njengomfana oneminyaka engu-16 ubudala. Ukuqala ubuhlobo nje kuphela ngemva kokufika kwakhe inyanga, uHector akazange azizwe elahlekile futhi eyedwa kulo muzi waseLondon.
Bobabili abathandi bezintandokazi bathanda ukwabelana ngezithombe zabo bonke abathandekayo. Isithombe esingezansi sabiwe kungenzeka emva kokulala.
Hector no Shree, bonke abathandekayo.
Ukuchitha isikhathi sekhwalithi ogwini lolwandle, impela ukufanelana okubili kokubili abathandi babelana. Abafana ngeke bamangale uma bememezela umshado wabo noma kunini.
Hector kanye nentombi, bechitha isikhathi sekhwalithi olwandle
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -I-CoD Lover
Njengomfana oneminyaka engu-16 enyakale edlulela kwelinye izwe, uBellerín wathola impilo eNgilandi inselele ngesikhathi esifanele. Udinga usizo lokubhekana nesivinini solimi nokubusa okunzima kokuqeqeshwa kwesikole se-Arsenal.
Ukuphila kwakhe kwakunzima kakhulu futhi azikho izinto eziningi abangayenza ngesikhathi sakhe yedwa ukuze abaphazamise udumo lwakhe. Ngaphandle kokuchitha isikhathi nentombi yakhe, uHector uchitha isikhathi sakhe sonke ukudlala i-Call of Duty ku-PlayStation 4.
Hector- I-CoD fan ekhulayo
Ngokufanelekile, lapho engagqamuli uhlangothi oluqondile e-Emirates, ushaya ngokucindezela izinkinobho ze-Console yakhe ye-PlayStation. Ngezansi ingxoxo yakhe ku-Call of Duty Event.
Yilabo ababambisene nabo be-U18s abaqale bamethulela ku-Call of Duty, futhi eminyakeni emihlanu phansi komgwaqo ubophezele emdlalweni wevidiyo womdlalo wokudubula womuntu wokuqala. UBellerín uthi eminyakeni emibili yokuqala ngemuva kokuqala ukudlala lo mdlalo, uzoyidlala usuku lonke ngemuva kokuqeqesha.
Enkulumweni ne ilanga, UBellerín uthe okulandelayo. "Ukukhululwa kwengcindezi kimi. Angitholi isikhathi esiningi sokudlala, ngakho-ke uma ngilabo abashade nami, ngivame ukudlala i-CoD kuphela. "
Ngaphandle kokudlala i-Cod nokuchitha isikhathi nentombi yakhe, uHector uthanda ukubukela uchungechunge lwe-movie nenja yakhe evame ukunikeza ukunakekelwa kuwo wonke ama-movie.
Hector nenja yakhe ekhombisa ukunakekelwa kwe-movie
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Uyashesha kukaTheo Walcott
Kusukela efika eqenjini emuva ku-2006, Theo Walcott ube ngumdlali osheshayo eNorth London. Ekuqaleni kwenkathi ye-2014-15, waphula Theo WalcottI-40-imitha ye-Arsenal i-sprint irekhodi nge-1 / 100th yesibili.
Theo WalcottUkurekhoda kwamamitha angu-40 kwakungu-4.78 imizuzwana kodwa iSpaniard yafaka ukuthi ngesikhathi se-4.77 emuva ku-2015. Kodwa-ke, imibiko manje isikisela ukuthi i-Bellerín ihlabelele leso sikhathi phansi kwe-4.42 enhle.
Empeleni, umvikeli we-Arsenal uyashesha futhi angakwazi ukuphuma "Triple-Triple" umdali wegolide u-Usain Bolt, ovale ngemizuzwana ye-4.64 ukumboza amamitha angu-40 wokuqala lapho ebeka irekhodi lomhlaba we-100-meter sprint.
Njengoba i-Intanethi isaziso, bobabili uBelerín noBolt baye bahlekisa ngisho ngokuyinkinga ngomunye nomunye Twitter. Ngaphandle kokungabaza, uHector ubhekwa njengomunye wabadlali bebhola eligijima kakhulu emhlabeni.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukwahlulelwa Ngokungafanele
Phakathi nobusika buka-2013, U-Arsène Wenger wathumela u-18 oneminyaka engu-17 ubudala ngokukweleta kwi-Championship ngaseWatford. Ngaleso sikhathi iSpanish yenza kuphela ukubonakala kwe-8 futhi abalandeli abaningi base-Arsenal babengakwazi ukuqonda isizathu. Njengoba kwacaca ukuthi lo mfana angeke athole imizuzu ayidinga, uWenger wamkhumbula ngemuva kwezinyanga ezimbili kuphela.
UHector uphinde wahlulelwa ngokungafanele yiWatford
Eminyakeni embalwa kamuva, isiphathimandla saseWatford uTroy Deeney sasiqondisisa ukuthi kungani umqeqeshi weLa Masia wadlala imidlalo embalwa kangaka eVicarage Road. Uveze ukuthi imenenja ngaleso sikhathi, uGippeppe Sannino, uthole ukuthi iSpain ilula kakhulu futhi ayivikeleki ngokufanelekile ukudlala ohlangothini lwakhe.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuguqulwa
Ukuvinjelwa kwakhe kwebhola nokulawulwa kwebhola lokunciphisa kungase kubenze. Kodwa ngaphambi kwesikhathi sakhe eLondon, uHector Bellerín wayenguwindi eBarcelona. Kwakuyilapho nje efika eNorth London eyashintsha yaba yinto egcwele.
Bekuyi Wenger yena owenza ucingo wokugcina ukuthi uyombuyisela emuva noma angakwenzi. Lo mFulentshi wabeka umqeqeshi osizayo uSteve Bould ukuba abe nesifundo esisodwa nomfana ukuze asize ukushintsha kwakhe ukuzivikela. UBould kwadingeka amfundise indlela yokuvikela kusukela ekuqaleni.
Namuhla, iBellerín manje iphakeme kakhulu njengomunye wabadlali abasha abasencane kuphela ku-Premier League kodwa emhlabeni jikelele.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -I-Undergraduate
Ku-2016, uHector wabhalisa inkambo ye-intanethi eYunivesithi yasePennsylvania, esikoleni saseLipladelphia esikoleni.
I-Bellerin iphishekela idiploma ekukhangiseni, futhi ibuka izinkulumo ku-intanethi futhi igcwalise izivivinyo kwiwebhusayithi yesikole.
Lo mfana usanda kuvuma ukuthi uthola ukuthi lolu hlelo luyinkimbinkimbi, kodwa yilokho okwakuthandayo kakhulu.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ama-Tattoo Facts
U-Hector Bellerin waziwa ngokusheshisa kwakhe egijima ngaphansi komgwaqo kodwa futhi wathola ukuhlonishwa komzimba wakhe.
I-speedster yaseSpanish ine-sleeve egcwele ewela ingalo yakhe yangakwesokudla ehlanganisa isithombe seVirgin Mary esibheka ubude be-forearm yakhe.
UHector wathi: "Nganginokuqala, i-rosary, umama wami wayevame ukuzithengela mina, kodwa kusobala ukuthi ngangingakwazi ukudlala nabo ngoba awukwazi ukugqoka noma yikuphi ubucwebe. "Ngakho nganquma ukuwubhala. Ngicabanga ukuthi ngingazungeze i-15 noma i-16 ngenkathi ngisenzile, futhi lokho kwakungokuqala kwami.
U-Hector ubuye abe nomdwebo wejuba nesibonakaliso somndeni. I-giant 'Umndeni' umele umzala wakhe, ugogo, udadewethu, umama wami nobaba nomzukulu kanye nabo bonke abaseBellerin. KuHector, konke okuphathelene nomndeni wami.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
U-Héctor Bellerín Moruno uvela emlandweni womndeni wase-Catalan ophakathi. Abazali bakhe, eyaziwa nje ngokuthi uMaty Moruno bangamaCatalans. Banikela indodana yabo ku-FC Barcelona ngesikhathi esincane se-6. Ukutshala izimali kweBhola kusukela manje kuhoxisiwe.
UBelerin wathenga ikhaya elisha eLondon, lapho abazali bakhe kulindeleke ukuba bahlale khona. Bebehlala eLondon eduze noHector. Muva nje, wathenga enye indlu eBarcelona. Lokhu kwafika phakathi kwe-speculation phezu kokuphuma kwe-Arsenal.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Izici ze-Zodiac
U-Hector Bellerin uqinisekisile ama-Pisces futhi unezici ezilandelayo kubuntu bakhe;
Amandla kaHector Bellerin: Unesihawu, ubuciko, enembile, enobumnene, ehlakaniphile, emculweni. Ubuthakathaka bukaHector Bellerin: Ukwesaba, ukuthembela ngokweqile, ukudabuka, isifiso sokubalekela iqiniso, kungaba yisisulu noma umfel 'ukholo. Lokho uHector Bellerin akuthandayo: Ukuba yedwa, ukulala, umculo, ukuthandana, imidiya ebonakalayo, ukubhukuda nezindikimba ezingokomoya. Lokho uHector Bellerin akuthandi: Yazi-konke, ukugxekwa, okudlulile okubuyela emuva ekuqhakambiseni nasekuhlukumezweni kwanoma yiluphi uhlobo.
Isilwane sasendle esithandayo sikaHector Bellerin: Uthe isilwane sakhe esithandayo siyi-tiger ngoba uyayithanda "Indlala". Ngokusho, lokhu kusho ukuthi iSpanishi inesifiso esidingekayo sokuphumelela.
Siyabonga ngokufunda i-Hector Bellerin's Childhood Story kanye namaqiniso angama-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!
UJack Wilshere Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts